Xog ku saabsan sababaha wadooyinka Muqdisho loo xidhay maanta oo soo baxday, kadib saacado jaha wareer ah. | Salaan Media
Xog ku saabsan sababaha wadooyinka Muqdisho loo xidhay maanta oo soo baxday, kadib saacado jaha wareer ah.
Iyada oo subaxnimadii hore ee saaka dadka reer Muqdisho aay ku soo tooseen wadooyinka caasimada oo inta badan xiran lana la’aa sababaha ka danbeeya ayaa dhawaan waxaa soo baxay xoga sheegaya in dowlada Soomaaliya ay heshay macluumaad la xariira falal amaan darro oo shabaab ay doonayaan in ay Muqdisho ka fuliyaan sidaa darteedna laga hor tegayo.
Xogaha soo baxay ayaa waxa ay hoosta ka xariiqayaan in Shabaab ay ka fulin lahaayeen weeraro isugu jira qaraxyo iyo weerarro toos ah goobaha muhiimka ah ee caasimada ku yaalla iyaga oo ku soo beegaya dhamaadka bishaan ilaa bilaawga Bisha May oo 1-keeda ay ku beegantahay xilligii Mareykanku ay khaarijiyeen Aadan Xaashi Ceyrow.
Iyada oo laga duulayo qatarahaasi xagga amaanka ah ayaa dowladu waxa ay ciidamo ku daadisay magaalada dhan iyada oo xirtay wadooyinka inta badan si ay uga gaashaamato khatarta oo aysan u dhicin mid lamid ah arintii layaabka laheyd ee xarumna maxkamada gobalka oo dhacday uun wax yar ka dib qatar leeska indha tiray oo Ingiriisku ka dhawaajiyay.
Wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya oo saxaafadu wax ka weydiisay arinta la xariirta wadooyinka maanta la xiray ayaa waxa uu ku soo koobay in ay aheyd howl-galadii caadiga ahaa ee amaanka lagu sugayay.